ဧရာဝတီ| November 1, 2012 | Hits:1
| | အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဂျကာတာ မြို့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ကျင်းပသော ၂၆ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား(ဓာတ်ပုံ – theseagames2011.blogspot.com)
ကျမ သိကျွမ်းဖူးသော တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်နှင့် တောင်တက်အသင်းမြန်မာအမျိုးသမီး လက်ရွေးစဉ်အသင်း အာရှပွဲမှာ ဘာကြောင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုသလဲMaster Sports က စက်ရုံပစ္စည်းများ လေလံတင်၍ အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာ ရှင်းပေးမည်သရဖူနှင့် အလှမယ် ရွေးချယ်ခြင်း ပြဿနာများအာဆီယံ ယူ ၁၉ ပြိုင်ပွဲ မြန်မာအသင်း အင်ဒိုကို ဂိုးပြတ်သွင်းပြီး အကြိုဗိုလ်လုပွဲတက်
မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 2, 2012 - 2:30 am ဦးမြသန်းထိုက် ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ သင်ပေးသူက နည်းလမ်းကောင်း သင်ပေးနိုင်ပေမယ့် အားကစား သမားကိုယ်တိုင်က အရပ်အမောင်း ခန္ဓာကို ပေမီ ဒေါက်မီ ဖြစ်မှ ယှဉ်နိုင်မှာပါ။ မဟုတ်ရင် သူများ ၂ လှမ်းပြေးတာ ကိုယ်က ၃လှမ်း လှမ်းနေရမယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ လုပ်သလို မူလတန်း မဟုတ်တောင် အလယ်တန်းအရွယ်၊ ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ်လောက်ကတည်းက အလားအလာရှိသူ ကလေးတွေကို ကျောင်းတွေမှာ လိုက်ရှာရွေးပြီး အားကစား အထက်တန်းကျောင်းလိုမျိုး ဖွင့်၊ သင့်လျောရာ အားကစားကို ကျင့်ရင်း သက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ အားဖြစ်မယ့် အစာတွေ ကျွေး (စားဖိုမှုးကတော့ ဖြတ်မစားနဲ့ပေါ့)။ ပြီးတော့ အားကစား တက္ကသိုလ်လိုဖွင့်ပြီး စာလဲ တဘက်ကသင်၊ အားကစားလဲ တဘက်က ကျင့် ဆိုရင် ပြန်တက်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Reply bota November 2, 2012 - 7:49 pm Rights မရှိ၊ Law မကြီးစိုး၊ ၀ါးတီး မ မှန်၊ လူမှန် မ ရွေး၊ မ အက္ခရာတွေများလွန်းလှတဲ. မြန်မာမှာ…. မောတယ်!